Shax aad ku ogaan karto Naagtaada ay gogol dhaaf sameysay | shumis.net
Home » galmada » Shax aad ku ogaan karto Naagtaada ay gogol dhaaf sameysay
Shax aad ku ogaan karto Naagtaada ay gogol dhaaf sameysay
Inkastoo ay aad u xuntahay in aad ka shakiso Marwadaada ,hadana marar badan ayey dhacdaa in raga qaarkood ay shaki ka qaadaan Marwadooda,dabeecadaas waa mid xun ,saas ay tahay hadana waxaan isku dayeynaa in aan qancino raga noocaas ah oo maseyrka badan.
Dhowr qodob ayaad ku ogaan kartaa in Naagtaada ay Gogol dhaafka bari ka tahay amaba ay sameysay,si ay Naftaada u qanacdo,maadaama ay arrintan tahay mid xasaasi ah ,waayo Maseyrka waa mid aad u kulul.
 Hadii uu badan yahay dhaq dhaqaaqa Xaaskaaga ,oo hadana ay been ku lamaansanatahay,xishood yarna uu jiro.
 In guriga ay timaaddo waqtiyo kala duwan ,habeenada qaar na ay ka caajisto galmada xalaasha ah ee gurigiina.
 Adigoo u baahan Xaaskaaga hadii ay habeenkii kugu adkeyso,oo hadana habeenkaas Subaxdeeda ay hurdada ku daahdo.
Intaan oo dhan hadii aad ku aragto Xaaskaaga ,waxa ay u badan tahay in ay sameysay gogol dhaaf laakiin ma ahan arrin lahubo ,waa saadaal la sameeyay ,oo qaarkood la tijaabiyay laguna guuleystay baaristeeda ,laakiin wax walba wey dhici karaan.
Title: Shax aad ku ogaan karto Naagtaada ay gogol dhaaf sameysay